Te-Norvezy - Video firesahana amin'ny firaisana ara-nofo. Velona ny fampielezam-peo sy ny Fiarahana.
Izany no Norvezy, ny tany mahafinaritra sy manintona foana
Tsara tarehy sy mangina, henjana sy mampino tsara tarehy Avaratra amoron-dranomasina, tsindraindray mirehitra amin'ny hainy ny mahavariana Polar jiro tsy fantatra lavitra firenena tsara tarehy indrindra fjords, ny Pianakaviana sagas sy angano trolls, mamirapiratra riandrano, goavam-be vato, lehibe mpiady Viking frigid frosty mangina ny old tanàna ary be dia be ny vokatry ny voankazo eo amin'ny vaovao ny rivotraVahiny mazàna tonga eto noho ny tsy hay hadinoina lavitra ny fjord, mandresy ny renirano nisamboaravoara, ary tafahoatra lavitra fiakaran'ny amin'ny alalan'ny tendrombohitra avo plateau Preikestolen sy Hardanger, ny Fiteny Troll sy vato Crag, ny Jostedalsbreen glacier sy ny Troll-Dalana, tsy nety resy hantsam-bato ary ny Valan-javaboary ny harena an-kibon'ny ny tena tsara, manan-karena amin'ny amboara ny fanjonoana an-dranomasina. Mpitsidika dia mianatra be dia be mahaliana sy hahafantatra ny mponina ao amin'ny aquarium ny Bergen, ary ny mikasika ny fomba amam-panao sy kolontsaina ao amin'ny firenena ny ao amin'ny Valan-javaboary-Museum"Polaria", an-tanàn-dehibe sy manan-tantara tranom-bakoka ny Oslo, Bergen tranom-Bakoka ao amin'ny tendrontany Avaratra sy ny art Museum, miezaka amin'ny fiarovana sy mahatsiaro ho toy ny Viking tany amin'ny tranom-Bakoka sarotra"Lofotr".
Norvezy dia tena manan-karena amin'ny fahiny lapa sy trano tsara tarehy, tsara ny fitsidihana ny toeram-ponenana ny mpanjaka Harold sy Bergen Katedraly Katôlika, tao Trondheim Sverresborg ny lapa sy ny Katedraly.
Mangatsiaka, ny olona rehetra ho hitanao eto ny fandaharam-potoana ny olom-pantatra sy ny firenena amin'ny tombontsoany manokana.
Tsy mino aho toy ny endriky ny zava-misy
Matoan-dahatsoratra ho an'ny fandaminana mahafinaritra nankany amin'ny namana sy ny mikitoantoana shores.
Mampino tsara fifantenana ny toerana mahafinaritra any Norvezy, ny tena izy ny hisambotra ny fanahy sy ny fahamboniany ny amin'ity firenena ity.
Efa ela aho no mesmerizing ny firenena, tena te-hitsidika.
Ireo mampino ny hatsaran-tarehy ny tontolo. Na dia avy ny sary handray ny fofonaina. Ny firenena amin'ny mahavariana ny natiora.
Tsy Mitonona Anarana Ny Fiarahana
Uzbekistan, ar gyfer cyfarfodydd
an-tserasera ny lahatsary amin'ny chat room Mampiaraka ny firaisana ara-nofo Mampiaraka tsy misy fisoratana anarana dokam-barotra Mampiaraka Mampiaraka toerana tsy misy fisoratana anarana Mampiaraka Fiarahana ho an'ny fifandraisana ny firaisana ara-nofo fampidirana lahatsary an-tserasera hihaona ho an'ny firaisana ara-nofo lahatsary fampidirana Mampiaraka sary video for free